Tiara - uphawu bemibuso nge a umlando ocebile. Ezinsukwini ubudala kwathiwa ezigugile kuphela izintokazi ka lunegazi lasebukhosini, futhi abameleli izikhulu ngubani ayenamandla okukwenza. Tiara wagcizelela esithile esikhethekile sokuphatha umnini wayo. Ngaphezu kwalokho, tiara ezigugile kuphela nabafazi abashadile, ngoba kwakucatshangwa ukuthi izidalwa abasha akudingeki inala ubucwebe. Baqale Uthole isipho lungekho ngaphambi kosuku lomshado.
Igama elithi "tiara" akuyona njalo kungagcini imiyalo ucezu ebaluleke kunayo zezinwele izintokazi izigodi zasebukhosini. Lokhu kubuye Imfanelo kwamandla, kanye izingubo accessory ye abefundisi ebalulekile asebekhulile emakhaya abo. Tiara - umnqwazo ezibumbeke njengebholo Isigaxa ufushanisiwe, abapristi yamakhosi Oriental lasendulo. Iphinde libhekisela umqhele kathathu uPapa, ehlotshiswe esiphambanweni kuze kudabuke umhlane, kuleli fomu uye ikhona kusukela ngekhulu le XIV.
Eyokuqala ukwenza tiara waqala François Nieto, a ngamagugu onekhono. Enye yalezi wambeka phambi kwabo imihlobiso Napoleon Maria-Louise, nomkakhe wesibili. Ngaphandle kokushintsha yasekhaya, inzalo Indlu Chaumet ngamagugu eyasungulwa, namanje uthengisa le-accessory imfashini. Namuhla, banikela ukunethezeka imigexo Antique enomlando ezithakazelisayo, futhi zamanje imfashini tiara at an ngentengo eqolo.
Uma sicabanga ukuthi tiara - umhlobiso for zezinwele zabesifazane okusikhumbuza umqhele "ngo-miniature", kuqhubeka ukugcizelela izikhulu womnikazi wayo futhi isimo ubucwebe. Abaklami asigcini umcabango wakho imingcele, ukudala umkhiqizo amazing kakhulu. Kusukela tiara luhlaka eqinile nakho ngeke kusize kunzima kakhulu ukugqoka, manje ngokuya ayenqabe. Lokhu kukuvumela ukuba ukuyisebenzisa umgexo noma ukugqoka ekhanda lakhe njengoba i-bezel ukuthi sibukeka sisihle ku isijeziso esiqinile, updo zakudala, izinwele iqonde noma abacaphuni eside.
Ikakhulukazi elihlanyiswa Tiaras Russian futhi abathengi Japanese. Eyokuqala lihlotshaniswa samakhosi, kanti isixuku esikhulu bazibheke abalandeli European imigexo umlando. Tiara wabuye wathenga umakoti ezivela emhlabeni wonke ubani uhlela umshado isitayela European.
Lokhu akusona isimanga, ngoba abantu abaningi abadumile wegazi yizicukuthwane wasebenzisa umhlobiso on wedding emcimbini. Ngokwesibonelo, ngesinye isikhathi ku inkosazana UDiana ashade INkosana uCharles, babegqoka iveli aluhlaza futhi zikanokusho lomshado tiara amadayimane, kamuva owaba ngomunye eqolo emlandweni lolu hlobo imikhosi.
Indlela ukugqoka tiara
Ngaphandle kweqiniso lokuthi manje tiara, ikakhulukazi uthanda umakoti, le mihlobiso kufanelekile futhi ezihlukahlukene imisebenzi lapho izingubo abamenyiwe bemibuso esikhethekile lokucabanga ukunamathela yokugqoka, ikakhulukazi okuthiwa uthayi emhlophe - omunye elawula kunazo, esekhona kusukela maphakathi nawo ekhulwini elidlule leminyaka. Tiara neyamukelekayo ngesikhathi amabhola, kufanelekile yaseshashalazini, amakhonsathi kanye gala dinner kusihlwa inxusa.
By the way, namuhla, Akekho okulahlile amantombazane abangashadile agqoke tiara. Yigqoke noma cha, akuxhomekile nje kuphela esimweni uhlobo celebration, kodwa futhi phezu isikhathi somhlangano. Tiara - lokhu umhlobiso, wadala kuphela kulo mkhosi kusihlwa. Emini kungabonwa ku izintokazi ingasaphathwa kanye kuphela kulezo zimo, uma kucatshangwa ukuthi kusehlakalo zigcine sekudlule isikhathi eside. Ngakho, ngokwesibonelo, kwaba ku lomshado iPrincess kaVictoria lapho umshado waqala at 15:30 futhi olwaphela ngemva impela kwamabili.
Kunoma ikuphi, ochwepheshe belulekwa ukuzwa zonke charm a tiara futhi uzigqoka okungenani kanye ngesikhathi. Lapho ngakho ngoba kubukeka abesifazane nezinkulu nezinhle zingabi asebegugile kanye brunettes, kuhlanganiswe kahle nge dress kusihlwa kuya phansi kanye High Heels, okuyinto ndawonye unikela ubukhosi, ngisho nalabo abagada abakwazi ukuqhosha a izikhulu lezinceku igazi.
Pusety - lokhu ubuhle wakhiwa imininingwane!